लामो दूरीका यातायात छिटो खुलाउन माग , कहिले खुल्छ ? यस्तो छ तयारी – Dainik Sangalo
लामो दूरीका यातायात छिटो खुलाउन माग , कहिले खुल्छ ? यस्तो छ तयारी
July 26, 2020 55
काठमाडौँ, ११ साउन / छोटो दूरीका यातायात सञ्चालनले यात्रुलाई समस्या पारेको भन्दै लामो तथा मध्यम दूरीको यातायात छिटो सुचारु गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जिल्लाबाहिर जानैपर्ने यात्रु समस्यामा परेकाले लामो दूरीको यातायात छिटो सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
स्वाँर भन्नुहुन्छ, “प्राइभेट गाडीले दोब्बर भाडा उठाएर यात्रु बोकिरहेका छन्, यात्रु ठगिएका मात्र छैनन् कोरोनाको उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् । निजी गाडीले कोरोना नसार्ने सार्वजनिकले मात्र सार्ने जस्तो सरकारको व्यवहार भयो । ” यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevसाम्राज्ञी लेख्छिन्–‘विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुछ’
चार सन्तानसहित कर्णालीमा हाम फालिन् आमा , यस्तो रहेछ कारण !